युद्ध मैदानका डाक्टरलाई कारवाही गरेर कस्तो पुरुषार्थ देखाउन खाेज्नु भाे मन्त्री ज्यु ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/युद्ध मैदानका डाक्टरलाई कारवाही गरेर कस्तो पुरुषार्थ देखाउन खाेज्नु भाे मन्त्री ज्यु !
शहरी क्षेत्रमा बस्ने र उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने मजुदरले घर जान नपाउँदा समस्या उस्तै छ । यसको समाधान गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरुले नै पनि वितरण गरेको राहतमा कुहिएको चामल परेको देखिएको छ । त्यस्तै, लकडाउन झेलिरहेका नागरिकको घरमा बिजुलीको बिल पठाउन थालेको छ । र, वैशाखभित्र नतिरे जरिवाना लाग्छ भनिरहेको छ ।
लकडाउनका कारण घरभित्रै थुनिइरहेका नेपालीलाई उनले सम्हालिने आँट, हिम्मत र साहस जुटाउन सहयोग गरेको थिए । पछिल्लो करिब १ महिनामा उनी टेलिभिजन च्यानलहरुमा सबैले चिन्न थालेको लोकप्रिय अनुहार बनेका थिए । तर, यसलाई सरकारले खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन पराएन । सरकारलार्इ लाग्याे उनले जथाभावी बाेले । र, उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर जिम्मेवारीबाट अन्यत्रै पन्छाउन स्पष्टीकरणकाे पत्र काटेकाे छ ।विरामीको उपचार गरेर फर्किका चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्ने, डाक्टरलाई कारवाही गर्ने, औषधी किनेर फर्किएका नागरिकलाई निर्घात कुटपिट गर्ने सरकारको कदमले कुनै पनि अर्थमा कोरोनाको संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउन सक्दैन ।